Al-shabaab oo sheegatay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Mandheera ee W/Bari Kenya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo sheegatay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Mandheera ee W/Bari Kenya
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay iyaga ka dambeeyeen weerarka saqdii dhexe ee xalay lagu qaaday magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya, kaas oo lagu dilay dad gaaraya 6 qof.
Afhayeenka Al-shabaab ugu qaabilsan dhinaca howlgalada militeriga Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa sheegay inay ka dambeeyeen weerarkaasi islamarkaana ay dileen sida uu tilmaamay dad gaalo ah.
“Weerarkii Mandheera wuxuu ahaa mid qorsheysan oo beegsanayey xubno gaalo ah oo ku sugnaa Mandheera, wuxuuna u dhacay sidii loo qorsheeyey, waxaana halkaas ku dilnay cadowgii halkaasi ku sugnaa, waxaan ku dilay 6 gaalo ah” Sidaasi waxaa yiri Sheekh C/casiis Abuu Muscab.
Dhinaca kale, warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegtay in weerarka ay dagaalyahanadda Al-shabaab ka fuliyeen xaafadda Buulo Bubliko ee Mandheera lagu dilay 6 ka mid ah shaqaalaha aan u dhalanin dadka deegaanka ee ka shaqeeya kaawooyinka dhagaxa ee duuleedka magaaladaas.
Weerarkaasi waxaa kaloo si xun ugu dhaawacmay hal qof, iyadoo la la’ yahay 2 kale, sida ay sheegeen taliska booliska Kenya oo ku dooday inay 25 shaqaaale soo bad-baadiyeen.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha magaalada Mandheera Cali Roobow ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay inay markale la dhibaataysan yihiin weerar laga tiiraanyoodo, waa sida uu hadalka u yiri, wuxuuna xaqiijiyey in 6 qof lagu dilay weerarkii Al-shabaab ay halkaas ka geysteen.